Ndị nne Taa bụ ebe nrụọrụ weebụ AB Internet ma anyị ji ịhụnanya na-eme ya, na-agwa ndị nne na nna niile ma ọ bụ ndị metụtara ụwa nke ụmụaka na ndị na-eto eto chọrọ ịchọpụta ozi banyere ịbụ nne, nna, ịzụ ụmụ, agụmakwụkwọ, akparamaagwa ụmụaka, ahụike ụmụaka, nka , Ezi ntụziaka maka ụmụaka, ntuziaka agụmakwụkwọ, ndụmọdụ maka ndị nne na nna, ndụmọdụ maka ndị nkuzi ... N'ikpeazụ, anyị raara onwe anyị nye n'ịkọwa ozi kachasị mkpa nke nne na nna ọ bụla, ma ọ bụ onye ọ bụla nwere ụmụaka ma ọ bụ ndị nọ n'afọ iri na ụma na nlekọta ha, ọ nwere ike ịmasị gị. Anyị na-ekwukwa banyere ezinụlọ, mmetụta uche, ụlọ akwụkwọ, ịmata ihe na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Ndi otu edere ede bu ndi mmadu, site n’otu uzo ma obu uzo ozo, jikotara uwa nke agum akwukwo na ndi nne. Ọpụrụiche n'ịgwa gị ihe niile ị chọrọ ịma gbasara ịzụ ụmụ gị. Ọdịnaya anyị na-enye dị oke mma ka inwee ozi kachasị mma i nwere. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịma ihe anyị nwere ike ịgwa gị, gaa na peeji nke anyị ngalaba!
El Ndị isi nchịkọta akụkọ nke Madres Hoy Ọ bụ ndị editọ na-eso ya:
Ọ bụrụ n’ịchọrọ iso n’otu ndị otu nne dere, dejupụta fọm a.
Zụ ụmụ bụ ụwa na-atọ ụtọ, juputara na nsogbu ndị nwere ike ịba ụba oge ụfọdụ. Hụn’anya ụmụaka nwere enweghi nsọtụ, mana ezughi oke oge niile iji dozie okwu nke ụbọchị. Achọpụtara m na akpụkpọ nke m dugara m inyochakwu banyere ịbụ nne na ịzụ ụmụ na-akwanyere ùgwù. Kekọrịta ihe mmuta m, gbakwunye na agụụ m maka ide ihe, abụrụla ụzọ ndụ m. Abụ m Toñy ma soro m gị na ụwa obi ụtọ a na-akpọ nne. .
Abụ m Alicia, nwere mmasị nke ukwuu maka ịbụ nne m na isi nri. Enwere m mmasị ige ụmụaka ntị na ịnụ ụtọ mmepe ha niile, ọ bụ ya mere ịmata ihe banyere ha enyela m ike ide ndụmọdụ ọ bụla a ga-enye dị ka nne.
Aha m bụ María José, m bi na Argentina, enwere m akara ugo na Nkwukọrịta, mana nke kachasị, nne nke ụmụ abụọ na-eme ka ndụ m dịkwuo mma. Enwere m mmasị ụmụaka mgbe niile ma ọ bụ ya mere m ji bụrụ onye nkuzi nke mere na ịnọnyere ụmụaka dị mfe ma na-atọ m ụtọ. Ọ na-amasị m ịnyefe, kuziere, mụta ma gee ntị. Karịsịa ma a bịa n'ihe gbasara ụmụaka. N'ezie, idekwa ihe dị ka nke a bụ na lee, m na-etinye pen m maka onye ọ bụla chọrọ ịgụ m.
Degree na English Philology, hụrụ asụsụ n'anya, egwu dị mma yana yana ịkpọ oku mgbe niile. Agbanyeghi na oru a nwere ike ijiko ya na ide ederede ya na nne. Worldwa nke anyị na-amụta, na-anụ ma na-achọpụta kwa ụbọchị yana ụmụntakịrị anyị, ka a kwatuo ebe a.
Nnọọ! Enwere m mmasị ide ihe na enwere m mmasị, site na ọrụ na ọzụzụ, nke okike na nkuzi, abụọ n'ime akụkụ nke ndị nne na-amụta ịme nche ma si otú a bụrụ ezigbo ndị ọkachamara maka ụmụ ha.
Nne, ulo akwukwo mmuta, mmuta uche na obi uto banyere ide ihe na nkwurita okwu. Childrenmụ m kuziiri m ịbụ ezigbo mmadụ na ihu ụwa n’ụzọ dị iche, ekele ha nọ na m na-aga n’ihu mmụta ... ...bụ nne gbanwere ndụ m, ikekwe na-agwụ ike karịa ma na-enwekarị obi ụtọ.
Ndewo, edere m ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ isiokwu ọbụla n'ihi na enweghị m ike ịme otu ọzọ. Mgbasa echiche, ụkpụrụ na ozi dị ka ihe dị m mkpa. Karịsịa isiokwu agụmakwụkwọ, nke a na-achịkwa ma ọ bụ na ọ bụghị, na ọzụzụ na ụmụaka na ndị na-eto eto na-atọ m ezigbo ụtọ.
Marta Castelos kwuru
Ọkammụta ọmịiko nwere mmụọ banyere ọgụgụ isi ọgụgụ isi yana mmepe onwe onye. Ọ na-amasị m ịme ihe niile enwere ike ka ụmụaka na ndị mụrụ ha dị mma, ma nke kachasị mkpa: nwee obi ụtọ, n'ihi na ọ dịghị ihe mara mma karịa ịhụ ezinụlọ dị n'otu.
Abụ m nna nke ụmụ abụọ mara mma ma hụ ihe niile metụtara agụmakwụkwọ na agụmakwụkwọ n'anya. Inwe ike idetu na Ndị Nne Taa na-enyere m aka inyefe ihe niile m mụtara n’ime afọ ndị gara aga dịka nna na di nke ezi ụlọ.
14 na ọkara afọ gara aga, ezutere m onye nkụzi ukwu m, afọ abụọ mgbe nke ahụ gasịrị, onye na-ebi ndụ kwekọrọ n’aha ya (Sofia) bịara n’ụwa; Ha adịghị ka ụmụaka nke nrọ m n'ihi na ha ka mma karịa ... Achọrọ m ịgwa gị ihe gbasara ihe m na-amụta ... na ka ị gwa m.
Amuru m na Bonn (Germany) na 1984 ma a bu m nwa ada Galician na ndi nne na nna ndi kwabatara. Mụaka anọwo na-abụ ntụnyere n’ime ndụ m; N'ezie, amụrụ m Bachelor nke Pedagogy n'ihi na amaara m, site na nwata, na ọrụ m ga-emetụta ha, na abụkwa m onye na-elekọta ụmụaka na onye nkuzi nzuzo n'oge ụfọdụ. Enwere m mmasị n'ihe m na-eme, enwere m olileanya na nke ahụ gosipụtara na isiokwu m.
Abụ m nne ụmụ abụọ m na-amụrụ ihe ma na-eto kwa ụbọchị. Na mgbakwunye ịbụ nne, nke bụ "aha" nke m ji anya isi, enwere m BA na Biology, Nutrition and Dietetic Technician and a Doula. Enwere m mmasị n'ịmụ na nyocha ihe niile metụtara nne na ịzụ ụmụ. Ugbu a, ana m ejikọ ọrụ m na ụlọ ahịa ọgwụ na nkuzi na nkuzi nke m na-akụzi na isiokwu dị iche iche metụtara nne.
Abụm m midwife, nne na-edekwa blog oge ụfọdụ. Ana m echegbu onwe m gbasara ihe niile metụtara nne, ịzụlite na uto nke ụmụ nwanyị. Naanị site na ịmara nke ọma ka anyị nwere ike ikpebi ihe ga-adịrị anyị na ezinụlọ anyị mma.
Maria Madroñal placeholder oyiyi
Nne nke ihe na-akpali akpali, onye na-azụ ihe n'ọdịnihu, onye na-achọ teknụzụ, onye na-ede akwụkwọ ebighi ebi na ndò, onye ọrụ aka, onye na-agụ abụ na onye na-ede abụ, onye na-amụ ihe niile, onye nkuzi nke ihe ọ bụla. N'ịhụnanya agụmakwụkwọ, egwu na ndụ niile. Positivist na njedebe, ihe niile nwere ezigbo akụkụ ma ọ bụrụ na ọ bụghị, m ga-ahụ maka ịmepụta ya. N'akụkụ obere m, ihe niile dị mfe karị.
Abụ m ọkà n'akparamàgwà mmadụ na onye edemede, agụụ mmekọahụ m na-ede na ụmụaka. M na-enyere ha aka ịkwalite nkà ha dị iche iche, ịbanye na ụwa a dị mgbagwoju anya ka ha wee mụta inwe obi ụtọ na nnwere onwe. Isoro ha rụọ ọrụ bụ ọmarịcha njem na-anaghị akwụsị akwụsị.
Aha m bụ Ale na abụ m Onye Ọzụzụ Nwatakịrị. Adịghị m nne ugbu a, ọ bụ ezie na n'ọdịnihu, m ga-achọ ịbụ otu kemgbe m hụrụ ụmụaka n'anya. Enwere m mmasị na ụwa nke isi nri, ọrụ aka na ịse ihe, ọ bụ ya mere m ji kwenyesie ike na m nwere ike inyere gị aka nke ukwuu na agụmakwụkwọ ụmụ gị.
Nne na omume, YouTuber mgbe ụfọdụ na Superior Laboratory Technician. Emezuru m nrọ m ịbụ nne na-eto eto, ụbọchị ọ bụla bụ ọhụụ ọhụụ, anaghị m agbanwe ya maka ihe ọ bụla! Achọrọ m ka agwa m gbasara nsogbu niile dị ugbu a gbasara etu e si zụlite ụmụaka anyị ma kesaa ihe niile m mụtara. Ekwenyesiri m ike na ụmụaka taa nwere ike ịgbanwe ọdịnihu nke ourwa anyị.
Mama ji anya isi nke otu nwa okorobịa n’afọ iri na ụma ya. N'ịhụnanya na ndụ na okike. Onye hụrụ akwụkwọ n'anya, foto na ịgba egwu kemgbe m bụ nwata. Onwe-kuziri site na okike na enweghi ngwụcha oru ngo nke m na-atụ anya ụra. Pụrụ iche na nwata akparamaagwa, ọrụ m bụ m ahuhu. Ọ na-eju m anya mgbe niile ka ụmụaka na-achọ ịmata ihe na ihe ha nwere ike ime.
Nnọọ! Abụ m ọkà mmụta mmekọrịta ọha na eze ma na-anụ ọkụ n'obi maka ụmụaka. M na-eme vidiyo banyere ihe ụmụaka ji egwuri egwu nke ụmụntakịrị nọ n'ụlọ ahụ kachasị. Na mgbakwunye na ịnabata ha maka ha, ha ga-enwe ike nweta ihe ọmụma ga-enyere ha aka na usoro agụmakwụkwọ na mmekọrịta ha na mmadụ, na-amụta ị metụtara ezinụlọ ha na gburugburu ha n'ụzọ dị mma na nke obi ụtọ.
Ọchịchọ m nwere maka agụmakwụkwọ dugara m na mbụ mụọ Mmụta Nwatakịrị na mgbe ahụ ọrụ Pedagogy. Na ọchịchọ ịmata ihe m (na njedebe a na-atụghị anya ya), dugara m inyocha isiokwu metụtara agụmakwụkwọ mmetụta uche, ịdọ aka ná ntị dị mma na ịkwanyere nne na nna na-akwanyere ùgwù ùgwù.
Enwere m ọchịchọ ịmata ihe, enweghị izu ike na enweghị nkwenye, nke na-eme ka m jụọ ajụjụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụwa gbara anyị gburugburu, ọkachasị ihe metụtara nne na ịzụ ụmụ, ebe ọtụtụ akụkọ ifo na nkwenkwe ụgha bi. Achọrọ m isi mgbọrọgwụ, ihe kpatara ya na site na ebe ahụ, ime ihe. Azụziri m ara na igbochi na ịkwalite ahụike ụmụaka.
Kemgbe m dị obere, enwere m agụụ ịkụziri ụmụaka ihe na igwu egwu ha. Ya mere enwere m olile anya na site na isiokwu m enwere m ike igosi gị uru niile nke mmemme ezinụlọ.